A Look at Zimbabwe's First Lady, Who Is Accused of Assault - PUBLIC TRUTH
A South African model’s claims of assault have drawn attention to Zimbabwe’s increasingly outspoken first lady Grace Mugabe, who has been viewed as a possible successor to her 93-year-old husband. Grace Mugabe and President Robert Mugabe returned to Zimbabwe Sunday, despite calls by a South African legal group and protesters for the Zimbabwean first lady to be denied diplomatic immunity.
Zimbabwe’s state-owned broadcaster showed Grace Mugabe and her husband being greeted at Harare International Airport by government and military officials.
The case has taken on a political flavor. South Africa’s main opposition party had warned President Jacob Zuma and his administration not to let Grace Mugabe leave. And lawyers working with the model said they will go to court to challenge the South African government if it is confirmed that immunity was granted to Mugabe. Willie Spies, legal representative at AfriForum, an organization that primarily represents South Africa’s white Afrikaner minority, said Grace Mugabe may be back in in Zimbabwe, but the legal actions may make it difficult for her to return to South Africa in the future.